လိမ္မော်ရောင်အချပ်ခြောက်များကိုအလှဆင် | လက်မှုပညာများဖွင့်ထားသည်
ဂျဲနီရေတွင်း | 28/09/2021 10:00 | ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း, လက်မှုပညာ, ပြန်လည်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့တွေ့မယ် လိမ္မော်ရောင်အချပ်များကိုအလွယ်တကူခြောက်အောင်ပြုလုပ်နည်း ဆောင်းရာသီ၌အလှဆင်ရန်လိမ္မော်ခွံများသို့မဟုတ်အခွံခွာပါ။ ၎င်းကိုဖယောင်းတိုင်များ (သို့) အလယ်အလတ်ပစ္စည်းများပြုလုပ်ရန်သုံးနိုင်သည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက လိမ္မော်သီးများကိုအခွံခွာပါမရ။ အချပ်များသည်အလွန်ပါးလွှာသောကြောင့်မလောင်သင့်ပါ။ လိမ္မော်သီး၏အခွံကိုသင်သုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်ဤအပိုင်းများသည်၎င်းတို့ကိုမလောင်ကျွမ်းစေရန်ထိန်းချုပ်လိမ့်မည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ငါတို့ထားတယ် 200ºမှာမီးဖို သို့မှသာပိုနွေးလာသည်။ အဲဒီအချိန်မှာငါတို့ကမုန့်ဖုတ်ဗန်းပေါ်မှာစက္ကူတွေတင်ထားတယ်၊ သူတို့ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အရမ်းမထိကြဘူး၊ သူတို့ကမီးရှို့ရင်တောင်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အပြင်ပြဿနာမရှိလည်းခြောက်နိုင်တယ်။
ငါတို့သွားမယ် မီးမလောင်စေရန်အာမခံသည်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါငါတို့သူတို့ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မယ်။ လိမ္မော်သီး၏အသွင်အပြင်သည်အခြောက်လှန်းထားသောအသီးဖြစ်သင့်သည်။
ဤပုံပေါ်သောအခါမီးဖိုကိုပိတ်။ ဗန်းကိုမဖြုတ်မီအတွင်း၌အနည်းငယ်အနားယူပါ ၎င်းအချပ်များကိုဝါယာကြိုးထိန်လင်းသို့လွှဲပြောင်းပါ လိမ္မော်ရောင်အချပ်များကိုစိုစွတ်စေသောတိမ်ကိုမဖန်တီးဘဲအလွယ်တကူပြုလုပ်ပါ။
တစ်ခါအအေး, ငါတို့ကသူတို့ကိုစက္ကူအိတ်တွေပေါ်မှာသိုလှောင်ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်သုံးနိုင်တယ် ဖယောင်းတိုင်၊ အလယ်အလတ်၊ ပန်းကုံးများ၊ အချိုပွဲများအလှဆင်ရန်
နှင့်အဆင်သင့်! သံပုရာ၊ ကျွဲကောသီး၊ သံပုရာသီးစသဖြင့်အခြားအသီးအမျိုးအစားများနှင့်ဤတူညီသောဖြစ်စဉ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုသုံးကြည့်ပါ။
ဆောင်း ဦး ရာသီရောက်လာတာနဲ့မင်းအိမ်ကိုအလှဆင်ဖို့ဒီလက်ရာကိုငါမျှော်လင့်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » လိမ္မော်ရောင်အချပ်များကိုအခြောက်ခံအလှဆင်ပါ